Inona Moa Ny Fananana Fizotran'ny Fisoratana anarana Ao Korea Ho an'ny Vahiny - TRANO KOREA - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Inona Moa Ny Fananana Fizotran'ny Fisoratana anarana Ao Korea Ho an'ny Vahiny - TRANO KOREA
Published on: aogositra - filed under: Blog - Tagged: vahiny fisoratana anarana amin'ny karatra, ao amin'ny distrika ny birao, ny tany fahazoana, orinasa lalàna, ny fananana, ny fananana ny fisoratana anarana, real estate firaketana, toeram-ponenana ara - barotra fananana Dia ianao manontany tena ny momba ny fomba hisoratra anarana ny vao nividy an-trano. Ve ianao te-hianatra bebe kokoa momba ny tena toetrany fisoratana anarana ho an'ny vahiny monina any KoreaRaha toa ka namaly hoe: 'eny' ny valin ny fanontaniana etsy ambony, dia vakio eo. Ireo vahiny izay buy real estate fananana any Korea dia ara-dalàna takiana mba hisoratra anarana ny fananana ny governemanta ao an-toerana. ny Vahiny' ny Tany Fahazoana Act (nohavaozina tamin'ny taona) ireo vahiny no afaka mividy ny toeram-ponenana sy ny ara-barotra real estate, afa-tsy ny fananana ara-kolontsaina, ara-tontolo iainana famandrihan-toerana, ny sasany ny fambolena, fananana, ary ny hafa manokana voaaro fananana. Ny vahiny izay mitoetra ao Korea afaka hividy ny toeram-ponenana ohatra: trano na trano. Vahiny mividy fananana any Korea Atsimo dia manaiky ny Vahiny ny Tany Fahazoana Asa sy ny Real Estate Fisoratana anarana Asa. Ny sasany fananana dia azo jerena ho an'ny vahiny monina any Korea raha ny hafa kosa mety afa-tsy ho hita ny vahiny amin'ny sata maharitra. Noho izany, alohan'ny manapa-kevitra ny hanao ny fividianana maka hevitra amin'ny tena toetrany ny mpandraharaha, na ny mety Governemanta birao manamarina. Ny fananana ny fisoratana anarana any Korea dia somary hafa kely noho izay angamba ampiasaina ao amin'ny firenena.
Tao Korea, ny fizotran'ny fisoratana anarana maka toerana ao amin'ny dingana roa. Ny dingana voalohany dia ny hahazo ny Tany fividianana tatitra Raha vao manana ny Tany fahazoana ny tatitra, dia tsy maintsy hametraka izany miaraka amin'ny antontan-taratasy hafa mba hahazoana ny real estate lisitra.
Raha vao ny mpividy mandoa manontolo ny vidiny, ny famindrana ny fananan-fisoratana anarana dia tsy maintsy vita ao amin'ny lisitra ao anatin'ny enimpolo andro ny fifandanjana fandoavam-bola daty. Izany dia hevitra tsara foana mba handeha any amin'ny olona iray izay afaka nahay ny fiteny koreana izy ary manana traikefa mifandray amin'ny fananana ny fisoratana anarana ho an'ny vahiny. Maro ny malagasy miteny ny tena toetrany ny mpandraharaha sy ny lalàna orinasa misahana ny fikirakirana antontan-taratasy ho an'ny vahiny. Naka professional hanampy afaka mamonjy ny fotoana sy ny tebiteby izany any aoriana any.
Minisitry ny Tany, ny Foto-drafitrasa sy ny Fitaterana (Korea Atsimo)
ಔಷಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಔಷಧ ಹತೋಟಿ - ಔಷಧ ವಕೀಲ